Ngathi - Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd.
I-3D ebhalwe ngobuhle
Ukudityaniswa kwe-extrusion Decking
WPC Wall khazi
Ukufakwa kwamadonga ngesiqhelo
I-3D Embossed Wall khazi
Ukudityaniswa kweDonga eludongeni
I-WPC DIY Decking
Iiphaneli zeBhentshi yeGadi yeWPC
Imbiza yeentyatyambo yeWPC
Anhui Lihua Wood edityanisiweyo Co., Ltd. yiTekhnoloji ePhakamileyo kunye eNtsha. Ishishini, eligubungele isityalo seemitha ezili-15,000, esime epaki yezorhwebo yaseLangxi, indawo edibana neAnhui, iZhejiang kunye nePhondo laseJiangsu, bonwabela ukufikelela lula kuthungelwano olukhulu lwezothutho. Umzi mveliso wethu wokudibanisa ukuyila, ukuphanda, ukuthengisa kunye nokusetyenziswa kwezinto zeplastikhi zomthi kunye nemveliso.
Imigca yokuvelisa engama-24 enemveliso yonyaka yeetoni ezingama-20 000, eqinisekisa iimveliso ezizinzileyo kunye nexesha elifanelekileyo lokuhambisa.Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya: i-WPC decking, i-WPC yokufaka udonga, ucingo lwe-WPC, i-WPC handrail, i-WPC pergola, imbiza yeentyatyambo ye-WPC kunye nebhentshi ye-WPC. Zonke iintlobo zezinto zenziwe ngeenkqubo ezingqongqo zeQC.
Sineqela leQC elinamava ngaphezulu kweminyaka emi-3 ebaleni. Iimveliso ziyahlolwa kwinkqubo nganye. Abanye babo bavavanywa ngumntu wesithathu. Kwakhona sazisa i-ERP yokulawulwa komgangatho okrelekrele kunye nenkqubo yemveliso. Zonke zicacile kwaye zilawulwa ukusuka kwelinye inyathelo ukuya kwelinye. Kakhulu singabasebenzi basekuhlaleni, bebesebenza apha iminyaka eliqela benamava emveliso abhetele. Iinjineli eziphambili bezisebenza kwizakhi ezingaphezulu kweminyaka eli-10.
Sineqela lokuthengisa kwiimarike zasekhaya nakwamanye amazwe. Sigxile ekuthengiseni, kwiimveliso ezintsha nakwitekhnoloji, sigcina ukutshintsha kunye nokuvavanya kubuchwephesha obutsha kunye neemveliso ezintsha.Sineqela elincinci nelinamandla lenkonzo elinokuphendula ngokukhawuleza kunye nokukwazi ukunxibelelana.
Abathengi bethu bavela eYurophu, eMntla Melika, eMzantsi Melika, eAfrika, kuMbindi Mpuma naseAsia. Iimveliso zeLihua ziye zavavanywa yi-SGS nge-EU WPC yokulawula umgangatho we-EN15534-2004, umgangatho wokulinganisa umlilo we-EU ngeBakala lokulinganisa umlilo kunye ne-American WPC standard ASTM. Kwakhona siqinisekisiwe ngeNkqubo yokuLawulwa koMgangatho ye-IS09001-2008, i-ISO14001: Inkqubo yoLawulo lokusiNgqongileyo ka-2004, i-FSC kunye ne-PEFC. Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu.
Izinto eziluncedo:Iimveliso zethu zinekhwalithi elungileyo kunye nekhredithi yokuvumela ukuba sikwazi ukuseta iiofisi zamasebe kunye nabasasazi kwilizwe lethu.
Itekhnoloji:Siyazingisa kwiimpawu zeemveliso kwaye silawula ngokungqongqo iinkqubo zokuvelisa, ukuzibophelela ekwenziweni kwazo zonke iintlobo.
Inkonzo:Nokuba iyathengiswa ngaphambili okanye emva kwentengiso, siya kukubonelela ngeyona nkonzo intle ukukwazisa kwaye usebenzise iimveliso zethu ngokukhawuleza.
Ukudala ngenjongo:Inkampani isebenzisa iinkqubo zoyilo eziphambili kunye nokusetyenziswa kwe-ISO9001 2000 yolawulo lomgangatho wolawulo lomgangatho wamanye amazwe.
Umgangatho ophezulu:Inkampani igxile ekuveliseni izixhobo zokusebenza eziphezulu, amandla oqinileyo obuchwephesha, amandla ophuhliso olomeleleyo, iinkonzo ezilungileyo zobugcisa.
Iqela Strong technicalSineqela lezobuchwephesha elomeleleyo kushishino, amashumi eminyaka yamava obuchule, inqanaba loyilo olugqwesileyo, okwenza izixhobo ezikrelekrele ezikumgangatho ophezulu.
Inombolo 46 yendlela yeBaishijian,
Umzi mveliso weLangxi,
Imeyile: alice@lisenwpc.com Ifowuni: 0086-0563-3830116 Ifowuni: 0086-13635632626
Iyafumaneka kuWhatsApp nakwiWechat
© Copyright - 2021-2025: Onke amalungelo agciniwe.
Ukutshekisha ngaphandle kwe-WPC, WPC decking edityanisiweyo, WPC decking ngaphandle, WPC nokwadala, WPC decking umgangatho, ezenziwe ngomthi yeplastiki edityanisiweyo,